Turkiga oo saldhigii milatari ee ugu horeeyay Afrika ka samaystay Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaTurkiga oo saldhigii milatari ee ugu horeeyay Afrika ka samaystay Soomaaliya
Turkiga oo saldhigii milatari ee ugu horeeyay Afrika ka samaystay Soomaaliya
October 1, 2016 Abdi Omar Bile Somalia 0
Ciidamada milatariga Turkiga. [Sawirka: Daily Sabah]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Turkiga ayaa dhameeyay qalabaynta saldhigiisii ugu horeeyay ee Afrika oo uu ka dhistay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Saldhiga ayaa martigelin doona saraakiisha Turkiga si ay u tababaraan askarta Soomaalida iyo ciidamada dagaalka kula jira ururka argagixisada ah ee Al-Shabaab. Dhawaan ayaana shaqadu bilaabmi doontaa.
Saldhiga, oo ay ogolaatay Qaramada Midoobay, ayaa ah saldhiga labaad ee milatariga Turkiga ku leeyahay dibada. Saldhigooda kowaad ayaa laga sameeyay gudaha dalka Qatar bishii lasoo dhaafay ee April kaasoo qayb ka ah heshiis dhanka amaanka ah oo gacan looga geysanayo la dagaalanka khatarta labada dal.
Saldhiga ayaa kuyaala caasimada Soomaaliya, waxaana uu saaranyahay xeebta Badweynta Hindiya. [Sawirka: Daily Sabah]
Ku dhawaad 200 oo saraakiil milatari oo Turki ah ayaa la geyn doonaa saldhiga kuyaala gudaha Soomaaliya si ay marka kowaad u tababaraan 10,500 oo askar Soomaali ah.
Turkiga ayaa Soomaaliya siinayay taageero milatari shanti sanno ee u dambaysay, iyadoo labada dal ay wada-galeen heshiis iskaashi oo dhaqaale iyo mid milatariba ah.
Turkiga ayaa dalka kuyaala Geeska Afrika siiyay in ka badan 400 milyan oo dollar oo caawimaad ah iyadoo uu dalka la daalaa-dhacayay abaaro daran.
September 4, 2019 Soomaaliya oo sheegtay in aysan marna gorgortan ka geli doonin muranka badda kala dhaxeeya Kenya
April 25, 2017 Madaxweyne Farmaajo oo u safray dalka Turkiga
June 5, 2017 Ciidamada dowladda Soomaaliya oo isku diyaarinaya guluf si looga xoreeyo gobolka Shabeellaha Hoose Al-Shabaab
November 20, 2017 Ciidamada badda Talyaaniga ee ilaalada ka haya xeebaha Soomaaliya oo qabtay lix nin oo looga shaki qabo burcadbadeed
Wasiir dowlihii madaxtooyada Puntland oo is-casilay
Qatar oo baabuur gaashaaman ugu deeqday Soomaaliya
Muqdisho-(Puntland Mirror) Qatar ayaa 68 gaari oo gaashaaman ugu deeqday Soomaaliya maanta oo Khamiis ah, sida ay sheegtay Wasaaradda Gaashaandhiga Qatar. Qatar ayaa sheegtay baabuurta oo maanta oo Khamiis ah laga dajiyay Muqdisho ay gacan [...]
Sargaal Qaramada Midoobay katirsan oo sheegay in burcad-badeeda wali ay khatar yihiin inkastoo guulo laga gaaray
Nairobi-(Puntland Mirror) Khatarta burcad-badeeda xeebaha Soomaaliya wali waa muuqataa inkastoo guulo badan laga gaaray, sida uu sheegay sargaal katirsan Qaramada Midoobay. Andrew McLaughlin, oo ah sargaal katirsan haayada Qaramada Midoobay u qaabilsan mukhaadaraadka iyo dambiyada [...]
Puntland oo taageero milatari ku wareejisay maamulka Galmudug
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Dowladda Puntland ayaa maanta oo Axad ah taageero milatari ku wareejisay maamulka Galmudug kuwaasoo dagaal kula jira maleeshiyada A-Shabaab. Taageerada ayaa ahayd hub iyo gaadiid, sida uu ku sheegay qoraalo mahadcelin ah uu [...]